Vaovao - Tantaran'ny fandrahoan-tsakafo induction
Nanomboka namokatra fandrahoan-tsakafo indostrialy i Shina tamin'ny taona 1980, taorian'ny fandrosoana efa ho 30 taona, ny indostrian'ny fandrahoana induction dia manafaingana ny fironana amin'ny fampandrosoana, ny mpanao fandrahoana sakafo induction dia mitana andraikitra lehibe kokoa amin'ny fiainan'ny olona.
Tamin'ny taona 2005 dia nitombo haingana ny indostrian'ny fandrahoana induction China niaraka tamin'ny vokatra 14,5 tapitrisa unit, fitomboan'ny 87,34 isan-jato noho ny 7,74 tapitrisa unit tamin'ny taona 2004. Tamin'ny 2005, ny isan'ny varotra isan-taona an'ny fandrahoana induction dia 13,76 tapitrisa, izay nitombo mihoatra ny 90% ampitahaina amin'ny 7,205 tapitrisa tamin'ny 2004.
Tamin'ny 2006, ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fandrahoana masaka haingam-pandeha any Shina, famokarana isam-bolana mihoatra ny 22 tapitrisa isan-taona, nahatratra 51,72% tao anatin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny 2005, fanondranana isan-taona 2,1 tapitrisa, avo 50% avo kokoa noho ny fe-potoana mitovy tamin'ny 2005, manatsara ny haavon'ny mari-pamantarana marika ny fizarana tsena marika folo ambony indrindra amin'ny 92,6%, lavitra ny fifantohana amin'ny tsena marika voalohany, ny fandrahoana induction amin'ny fitaovana ao an-dakozia dia ny masonkarena ny fitomboan'ny vokatra.
Tamin'ny 2007, taorian'ny nampidinina ny vidin'ny tontonana microcrystal fahandro fampidirana, dia nanomboka ny «ady vidiny» ny ampahany amin'ny orinasan-tsakafo fampidirana notarihin'i Galanz, Midea, Jinling, Kewei, sns. Ary io ady vidin-javatra io, manaova andiany ny orin'asan'ny lafaoro electromagnetism izay mirenireny amin'ny sisin'ny delestazy noho ny vokatra tsy azo tanterahina very fahavelomany tanteraka, koa mahatonga ny mari-pahaizana fifantohana marika amin'ny indostria. Tamin'ny 2007, ny famolavolana ny indostrian'ny fandrahoana induction dia lehibe kokoa, ny volana oktobra fotsiny dia misy 20 % ny orinasa nesorina.
Ny tsenan'ny fandrahoana induction taorian'ny niainany ny fanambinana tamin'ny 2005, ny tapany faharoa tamin'ny 2006 dia nifanena tamin'i "Waterloo" hatramin'ny 2007 nitohy nalemy, niditra tamin'ny telovolana fahatelo 2008, ny tsenan'ny fandrahoana induction dia niditra herintaona tamin'ny varotra vanim-potoana tampon'isa kely. Ny krizy ara-bola eran-tany sy ny fihenan'ny toekarena, ny fitaovana kely amin'ny fihenan'ny fitomboan'ny indostrian'ny fampitaovana tokantrano ao an-trano dia tsy manam-paharoa. Tamin'ny taona 2008, ny orinasa an-trano dia nanao varotra fitaovana kely an-trano tamin'ny telo ampahefatry ny fitomboana.